Waxbarashada Tooska ah ee Dhammaan Ardayda Minnesota
Tonka Online, wuxuu u furan yahay dhammaan ardayda Minnesota, wuxuu bixiyaa khibrad waxbarasho oo gaar ah oo leh in kabadan 50 koorso. Barnaamijkan dheeriga ah wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kalabar kalabar casharadaada ku qaadatid khadka tooska ah, adoo joogaya degmadaada ama barnaamijkaaga. Haddii ardaygaagu ka diiwaangashan yahay Dugsiga Dadweynaha Minnetonka, ama uu dhigto dugsi kale oo dawladeed ama mid gaar loo leeyahay, ama uu yahay mid wax lagu barto guriga - dhammaan ardayda ku nool Minnesota way ka faa'iideysan karaan Tonka Online.
Khibrad Ayaa Isbeddelaysa
Koorsooyinka waxaa lagu soo saaraa guriga dhexdiisa waxaana wax ku bara macallimiinta dhabta ah ee 'Minnetonka' oo leh waayo-aragnimo sannado badan oo ku saabsan bixinta waxbarashada internetka iyo tan dhaqameed.
Koorso kasta waxaa si gaar ah loogu talagalay barashada internetka si loo hubiyo in ardayda ay helaan khibrad aan caadi ahayn
Koorsooyinkeennu waxay la kulmaan filashooyinka manhajka ugu tayada sarreeya ee Degmada Dugsiga Minnetonka.
Macallinkaaga ayaa la heli doonaa intaad waayo-aragnimadiisu tahay si uu kuugu hago guusha.
Ka dhig Qorshahaaga 4-ta sano ee Shaqsiyeed mid Suurtagal ah
Hesho dabacsanaan adoo ku dhammaysanaya koorsooyinka waqtigaaga gaarka ah
Ku kasbo PE ama amaahda kale ee loo baahan yahay si aad boos uga hesho jadwalkaaga
Ka bood hore adoo qaadanaya fasal udiyaarin maaddo caqabad ku ah
Ku qufo naftaada koorso AP ah oo hel dhibcaha kulleejada
Diiwaangelintu way fududahay Tonka Online! Guji badhanka hoose ee u dhigma nooca ardaygaaga.
Ardayda Ka baxsan Degmooyinka
Ardayda dhigata fasalada 9-12 dhamaan gobolka Minnesota.
Diiwaangelinta Ka baxsan Degmada
Ardayda Gudaha Ka ah Degmada
Ardayda hada dhigata Dugsiga Sare ee Minnetonka
fasalada 9-12 iyo kuwa cusub ee imanaya.
Diiwaangelinta Ardayda ee MHS
Waxbadan Ka Baro Tonka Online
Xaqiiqada Degdega ah
Samee Tirinta Xagaaga
Ka Maqal Arday
Koorsooyinka ay dhigayaan macallimiin khibrad leh, khibrad u leh bixinta internetka iyo waxbarashada dhaqameed.
Waxaa si buuxda u aqoonsan Waaxda Waxbarashada ee Minnesota iyo hay'adda NCAA.
Dabacsanaanta ayaa u oggolaaneysa ardayda inay wax ku bartaan xawaarehooda, qaataan koorsooyin la jaan qaadaya danaha isla markaana kordhiya kartidooda inay ku guuleystaan.
Ku xujee ardayda inay helaan koorsooyinka AP ee kordhinaya waxbarashadooda, ama qaadanaya koorsooyinka asaasiga ah iyo kuwa la doorto sanadka oo dhan.
50 + koorsooyin iyo 12 koorso AP ah oo lagu bixiyo Tonka Online.
81% ayaa dhaliyay 3 ama ka sareeya (celceliska gobolka 66.7%) imtixaanada AP.
* Iyada oo ku saleysan xogta 2020.
Barnaamijkan la aasaasay wuxuu lahaa diiwaangelin ardayda 1,576 sanad dugsiyeedka 2018-19.
94% ayaa ku soo warramay jawi waxbarasho wanaagsan oo loo maro Tonka Online.
Ikhtiyaariyada Koorsada ballaaran
In ka badan koorsada 60 ayaa lagu heli karaa maadooyin fara badan, sida:
Koorsooyinka AP & AP Prep
Sawir Dijital ah
Hordhaca Hormarinta App
… Iyo qaar kaloo badan
Ma waxaad dooneysaa inaad wax badan ka qabato xagaagaaga?
Tonka Online wuxuu bixiyaa koorsooyin xagaaga ah oo loogu talagalay ardayda dhigata fasalada 8-12 ee Minnesota oo dhan, ha ahaadaan kuwa ka diiwaangashan Degmada Dugsiga Minnetonka, dhigta iskuul kale oo dawladeed / mid gaar loo leeyahay ama guriga lagu bartaa - ardaydaasi dhammaantood way ka faa'iideysan karaan Tonka Online!
Wax dheeri ah ka baro Koorsooyinka xagaaga